ဖြေရှင်းချက် - တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးငှားရမ်းခမှာ ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုနံရံကပ်စက်ရုံ
တရုတ်ပြည်တွင်ထိပ်တန်း ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုနံရံကပ်ထုတ်လုပ်သူ
ပြင်ပနံရံကို ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်
ကျဉ်းသောအစေး ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်
မိုးလုံလေလုံမြို့ရိုးအ ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်
ဖန်တီးမှုမမှန် led မျက်နှာပြင်
High definition မျက်နှာပြင်အိတ်များ
သေးငယ်တဲ့ pixel မျက်နှာပြင်ဖြေရှင်းချက်
အားကစားကွင်းမျက်နှာပြင်ဖြေရှင်းချက် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ယာဉ် ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်ဖြေရှင်းချက်
ကြော်ငြာက ဦး ဆောင်ဖန်သားပြင်အဖြေ
Hitro LED သည်အမျိုးမျိုးသော led display နံရံများအတွက်သော့ခလောက်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးထားသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်မိုးလုံလေလုံကနေနေကြပါတယ် & ပြင်ပကြော်ငြာ LED display ကို, စင်မြင့် LED မျက်နှာပြင်, အားကစား LED မျက်နှာပြင်, အားကစားကွင်းပတ်လည်အတိုင်းအတာ LED display ကို, အဖြစ်အပျက် LED display ကို, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED display ကို, ထိုကဲ့သို့သောဘောလုံးအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောဖန်တီးမှု LED display ကို, တုံး, ဆလင်ဒါ, စသည်တို့, တီဗီဘူတာရုံ LED display ကို, အစိုးရရဲ့ LED မျက်နှာပြင်, မြေအောက်ရထား LED display ကို, တက္ကစီ LED display ကို, ကြမ်းပြင် LED display ကို, စွမ်းအင်ချွေတာ LED display ကို, နှင့်ပိုပြီး.
ငှားရမ်းခအဆင့် LED Display ကို
အငှား LED display အဓိကပြissueနာမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်, လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်း, ငါတို့အမြဲတမ်းရေရှည်တည်တံ့သောဖြေရှင်းနည်းများသုတေသနပြုခဲ့ကြ. ငှားရမ်းပုံးသည်, မကြာခဏဆိုသလိုဖွဲ့စည်းထားသောအဆောက်အအုံ၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်၎င်းတို့အားအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ …
အကြီးစား Led မျက်နှာပြင်ကြော်ငြာခြင်း
ဒီနေ့ခေတ် LED စျေးကွက်မှာ, ကြီးမားပြီးသေးငယ်သည့် LED display ထုတ်လုပ်သူများသည်စွမ်းအင်ချွေတာသော LED display ကိုမိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်, ပြောပါ 50%, 55%, 60% သို့မဟုတ်ပင် 70% ပိုပြီးစွမ်းအင်ချွေတာတဲ့သဘောတရားတွေ. အဆုံး၌တကယ့်စွမ်းအင်ချွေတာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်? စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းသည်သီးခြားဖော်ပြသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနည်းပညာတိုးတက်မှုအပေါ်မှီခိုနေသည်…
Transparent LED Display ကိုကုလားကာနံရံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်, နှင့်မည်သည့် Building structure ကိုပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။ Standard module အရွယ်အစားသည်ရိုးရှင်းပြီးကြော့ရှင်းပါသည်,ရှေ့နှင့်နောက်အဘို့အမြင့်ပွင့်လင်းမှုနှုန်း,ပြီးပြည့်စုံသောအလင်းရောင်, ထို့နောက်ကျော်အိပ်မက်ခြင်းနဲ့တူအမြင်အာရုံ 50% ရိုးရာ display ကိုထက်စွမ်းအင်၏.
အားကစားကွင်းပတ်လည်အတိုင်းအတာ LED Display ကို
ပတ်လည်မီတာ LED မျက်နှာပြင်သည်လူကြိုက်အများဆုံး LED ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. မတူကွဲပြားသောကစားနည်းများသည်စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာ၏တန်ဖိုးကိုများစွာမြှင့်တင်ပေးသည်. ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်တောက်ပသောအရောင်များနှင့်အတူ, ပတ်ပတ်လည်တိကျစွာအမှတ်တံဆိပ်အယူအဆပြသသည်….
Advertising ကြော်ငြာထရပ်ကားဖြေရှင်းချက် LED: ကျွန်ုပ်တို့သည် LED ဖန်သားပြင်များထုတ်လုပ်ရန်ရည်စူးထားသည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် , နှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်, ထိုကဲ့သို့သောမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပများအတွက်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအဖြစ်, ကြော်ငြာကုန်တင်ကားများကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းယူနစ်များကိုလည်း LED ဖန်သားပြင်များအဖြစ်လည်းကောင်း၊, သို့မဟုတ် Trailers. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ရှေ့သို့မြန်ဆန်စွာရောက်ရှိနိုင်ပြီး Worldwide LED ကြော်ငြာထုပ်ကိုတင်ပို့နိုင်သည်
အမြင့် resolution ကို LED Display ကို LED
ရိုးရာ LED ဖန်သားပြင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သေးငယ်တဲ့အလင်းရောင်ခြည်ဖန်သားပြင်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အင်္ဂါရပ်ကအစက်ငယ်ငယ်ပဲ. လက်တွေ့ကျတဲ့ applications များ, အဆိုပါအစက်အစေးသေးငယ်သည်,ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ်သည်းဆပိုမိုမြင့်မားသည်,နှင့်အချိန်တစ်ယူနစ်perရိယာနှုန်းပြသနိုင်သည့်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်စွမ်းရည်….
P2.6 hd မိုးလုံလေလုံပါးလွှာပြီးအပြည့်အ ၀ အရောင်အပြည့်ငှားရမ်းခြင်းကြောင့်ကြော်ငြာအတွက် display မျက်နှာပြင်
မိုးလုံလေလုံငှားရမ်းမှုအနေဖြင့်ပြသထားသည့် P2.9 500x500mm ဇာတ်စင်နောက်ခံတွင်ဗီဒီယိုနံရံကိုတပ်ဆင်ထားသည်
P3.91 ပြင်ပငှားရမ်းသော LED မျက်နှာပြင်ကိုသေတ္တာသွန်းထားသောလူမီနီယံသေတ္တာများတပ်ဆင်ထားသည်
အရောင်အပြည့် LED display SMD video wall ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း?
အမျိုးမျိုးသောကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ led display, အသက်အရွယ်စမ်းသပ်မှုအောက်တွင် ဦး ဆောင်ငှားရမ်းနံရံနှင့်ကခုန်ကြမ်းပြင်
သေးငယ်သော pixel pitch P1.25 ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုနံရံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံတွင်အသက်အရွယ်စမ်းသပ်နေဆဲဖြစ်သည်
မူပိုင်ခွင့် 2021 © Hitro LED ကုမ္ပဏီလီမိတက် --အီးမေးလ်: [email protected]